Benefits nokuti imi
Advantages nokuti imi
Kurapa PASINA zvakabatanidzwa
Anobudirira dzakati icho haufaniri kushandisa upiyona yakanyatsoti enyika kuti mazino displacements.
Kunyoresa zviri kuchengeterwa nzvimbo zvokurapa uye anotanga purogiramu yokudzidzisa chete mavhidhiyo kosi yedu,.
Setup uye vakasununguka Masiki pakuparwa ndakapedza Kupedzwa kurapwa kana kuti kurasikirwa kana pakakuvara kuti asingazivikanwi.
Unogona kutumira mapikicha ari pakatsikwa netsoka kuti nhamba yedu nguva dzose iripo parunhare uye kuwana mhinduro dzemibvunzo yako yose iri kunaka chete, izvo zvichaita kudzorwa pakakwirira chisarudzo Monitor zvakananga; apo murwere achiri kudzidza.
Implementation kubatsirwa uye POST Production
Setup with Video, dzokorora, nguva dzose vakasununguka valet. Tiri iripo upi kunetsana panguva mberi nyaya.
Mbuva FOR Marketing HALL chitarisiko
Click uye okumbira mahara bhurocha kunounza kuti tafura kana pasi, informational mavhidhiyo uye mabhurocha varwere venyu.
Kuonekwa MORE’ RAKARURAMA UYE FAST PASINA Attachment Masiki WITH Ultra segirazi
Biomechanics chinozoiswa vakavirikidza akagadzirwa aligners Extra UP uye UP wokushandura chiedza uye kugara mauto ose danho uye kumanikidzwa pfungwa (DIVOT) mhuri’ chinoitirwa kambani kuderedza vose criticality ose chifukidzo aligners monkey. With extrusions uye rotations pasina kuda. Uye zvikuru kumeso uye Utsanana Masiki ane nani murwere zvaidiwa, nemhaka "Achinyemwerera Glass" Michina.